Bit By Bit - အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်း Creating - 5.2.3 နိဂုံး
လူ့တွက်ချက်မှုစီမံကိန်းများကိုအလွယ်တကူကွန်ပျူတာများအားဖြင့်ဖြေရှင်းကြသည်မဟုတ်ကြောင်းလွယ်ကူတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်-ကြီးတွေ-စကေးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အများကြီး Non-ကျွမ်းကျင်သူများ၏လုပျငနျးပေါင်းစပ်။ သူတို့ကအထူးပြုကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲလူတွေဖြေရှင်းနိုင်ရိုးရှင်း microtasks အများကြီးသို့ကြီးမားသောပြဿနာကိုချိုးဖျက်ဖို့ split-လျှောက်ထား-ပေါင်းစပ်နည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုပါ။ ကွန်ပျူတာ-ကူညီလူ့ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုလည်းလူ့အားထုတ်မှုများကိုချဲ့ထွင်နိုင်ရန်အတွက်စက်သင်ယူမှုကိုသုံးပါ။
လူမှုရေးသုတေသနအတွက်, လူ့တွက်ချက်မှုစီမံကိန်းများကိုသုတေသီများခွဲခြားချင်ဘယ်မှာအခြေအနေများ, code ကို, ဒါမှမဟုတ်တံဆိပ်ပုံများ, ဗီဒီယို, သို့မဟုတ်စာသားများများတွင်အသုံးပြုခံရဖို့အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအမျိုးအစားခွဲခြားမှုများသောအားဖြင့်သုတေသန၏နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်မဟုတ်; အစားသူတို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ကုန်ကြမ်းဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်နိုင်ငံရေး, စာတမ်းတွင်၏လူအစုအဝေး-နိုင်တဲ့ coding ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးငြင်းခုံ၏ဒိုင်းနမစ်နှင့် ပတ်သက်. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့အထူးပြုသင်တန်းနှင့်အခါမှန်ကန်သောအဖြေနှင့် ပတ်သက်. ကျယ်ပြန့်သဘောတူညီချက်လည်းမရှိမလိုအပ်ပါဘူးသည့်အခါခွဲခြား microtasks ဤအမျိုးမျိုးအကောင်းဆုံးလုပ်ကိုင်ဖို့များပါတယ်။ အဆိုပါခွဲခြားတာဝန်ထက်ပိုသောပုဂ္ဂလဒိဋ္-ကဲ့သို့သောသည်ဆိုပါက, "biased ဤသတင်းပုံပြင်လား?" - ထို့နောက်ပါဝင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဘက်လိုက်မှုသူတို့ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်းသူနားလည်ရန် ပို. ပို. အရေးကြီးသောဖြစ်လာသည်။ အမှိုက်သရိုက်ထွက်အတွက်အမှိုက်သရိုက်: အဆုံး၌, လူ့တွက်ချက်မှုစီမံကိန်းများကို၏ output ၏အရည်အသွေးလူ့သင်တန်းသားများကိုပေးသောသွင်းအားစုများ၏အရည်အသွေးအပေါ်မှာကျိန်းဝပ်။
နောက်ထပ်သင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်စားပွဲ 5.1 လူ့တွက်ချက်မှုလူမှုရေးသုတေသနများတွင်အသုံးပြုထားပြီးမည်သို့နောက်ထပ်ဥပမာပေးပါသည်။ ဤသည်ကိုစားပွဲက Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံနှင့်မတူဘဲ, များစွာသောအခြားလူ့တွက်ချက်မှုစီမံကိန်းများ (ဥပမာအမေဇုံစက်မှု Turk) microtask အလုပ်သမားစျေးကွက်ကိုသုံးပါနှင့် paid လုပ်သားများထက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအပေါ်အားကိုးကြောင်းပြသထားတယ်။ ငါသည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ပူးပေါင်းစီမံကိန်းကိုဖန်တီးခြင်းအကြောင်းကိုအကွံဉာဏျပေးတဲ့အခါငါပါဝင်သူလှုံ့ဆျောမှု၏ဤကိစ္စကိုမှပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
စားပွဲတင် 5.1: လူမှုသုတေသနအတွက်လူ့တွက်ချက်မှုစီမံကိန်းများဥပမာ
Code ကိုနိုင်ငံရေးပါတီကြေညာစာတမ်း စာသားမ Microtask အလုပ်သမားစျေးကွက် Benoit et al. (2016)
200 ကိုအမေရိကန်မြို့ကြီးများအတွက် Occupy ဆန္ဒပြအပေါ်သတင်းဆောင်းပါးတွေထဲကနေဖြစ်ရပ်သတင်းအချက်အလက် Extract စာသားမ Microtask အလုပ်သမားစျေးကွက် Adams (2016)
သတင်းစာဆောင်းပါးများခွဲခြား စာသားမ Microtask အလုပ်သမားစျေးကွက် Budak, Goel, and Rao (2016)
ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းစစ်သားဒိုင်ယာရီကနေအဖြစ်အပျက်ကိုသတင်းအချက်အလက် Extract 1 စာသားမ စေတနာ့ဝန်ထမ်း Grayson (2016)
မြေပုံပြောင်းလဲမှုများ detect ပုံရိပ်တွေ Microtask အလုပ်သမားစျေးကွက် Soeller et al. (2016)
algorithmic နိုင်တဲ့ coding Check စာသားမ Microtask အလုပ်သမားစျေးကွက် Porter, Verdery, and Gaddis (2016)
နောက်ဆုံးအနေနဲ့, လူ့တွက်ချက်မှုသိပ္ပံပညာအပေါ်တစ်ဦးဒီမိုကရေစီသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်ကိုဤအပိုင်းကိုပြသအတွက်ဥပမာ။ သူတို့က Galaxy တိရစ္ဆာန်ရုံစတင်လာတဲ့အခါ Schawinski နှင့် Lintott ဘွဲ့ရကျောင်းသားတွေအတွက်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်မတိုင်မီကတစ်ဦးသန်းနဂါးငွေ့တန်းခွဲခြားခွဲခြားဖို့စီမံကိန်းအတွက်ကသာကောင်းစွာ-ရန်ပုံငွေနှင့်လူနာပါမောက္ခများအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့အများကြီးအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံမလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဒါကမရှိတော့စစ်မှန်တဲ့ပါပဲ။ လူ့တွက်ချက်မှုစီမံကိန်းများကိုလွယ်ကူတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်-ကြီးတွေ-စကေးပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးဖို့အများကြီး Non-ကျွမ်းကျင်သူများ၏လုပျငနျးပေါင်းစပ်။ Next ကိုငါအစုလိုက်အပြုံလိုက် ပူးပေါင်း. ကျွမ်းကျင်မှုပင်သုတေသီသူ့ကိုယ်သူရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ကြောင်းပြဿနာများလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်သင်ပြပါလိမ့်မယ်။